Isikhokelo esiqinisekileyo kwiziko lezaziso le-iOS | IPhone iindaba
Isikhokelo esichazayo kwiziko lezaziso
Iindaba ze-IPad | | iOS, Izifundo kunye neencwadana
IZiko leSaziso liqale labona ukukhanya nge-iOS 5 njengendlela yokufumana kunye nokufikelela kwizaziso naphi na. Ngaphambi kwe-iOS 5, izaziso zazicaphukisa kwaye zinengxaki, kodwa oku kubonakala kusombulula uninzi lwezo ngxaki.
Namhlanje, iZiko leSaziso libe yinto ebalulekileyo ye-iOS, ke namhlanje sikulethela esi sikhokelo esiya kukunceda ufumane olona phawu.
1.1 Ukungena kunye nokuphuma
1.3 Umbono wanamhlanje
1.4 "Zonke" kunye "Akubonwa" imibono
2.1 Ukutshixa ukufikelela kwescreen
2.2 Ukujonga «Namhlanje»
2.3 Ukujonga Izaziso
3.1 Uhlobo lwesilumkiso
Ukungena kunye nokuphuma
Iziko lezaziso, esona siseko salo, sisilayidi esigqityiweyo esibonakala xa usilayida umnwe wakho kwibar yomgangatho ukuya ezantsi kwesikrini. Esi senzo sinokwenziwa naphina naphina.
IZiko lezaziso linokufikeleleka zombini ngelixa isixhobo sethu sikwimo yemifanekiso kunye nakwimo yokuma komhlaba. Inokuvulwa ngelixa kusetyenziswa usetyenziso olupheleleyo lwescreen (isicelo esifihla ibha yomgangatho).
Uninzi lwezicelo zesikrini esigcweleyo yimidlalo okanye abadlali bevidiyo. Ukuvula iZiko leSaziso kwezi meko kufuneka sityibilikise umnwe wethu kwindawo apho kufanele ukuba kukho ibar yewonga, emva koko kuya kuvela utolo olusezantsi, xa oku kusenzeka, kufuneka sityibilikise umnwe wethu kwakhona kwicala eliboniswe utolo. U-Apple uye wafuna ukusebenzisa le ndlela kwi-iOS ukuze iZiko leSaziso lingabi ngengozi ngelixa ubukele ividiyo okanye udlala umdlalo.
Ukuphuma kwiziko, swayipa usuka ezantsi kwesikrini.
Iithebhu ezahlukileyo ngaphezulu kweZiko leSaziso- elibizwa ngokuba ziimboniso- zavela ecaleni kwe-iOS 7. Iimbono ("Namhlanje," "Zonke," kunye "neZingabonwayo") zikuvumela ukuba wahlule izaziso ngokusengqiqweni.
Ukutshintsha ukujonga, ungacofa ithebhu nganye okanye uslayide umnwe wakho kwiscreen uye ngasekunene okanye ngasekhohlo ukuhamba phakathi kweembono. Umzekelo, ukuba uku "Namhlanje" ujonge kwaye uswayipha ngasekhohlo, uya kutshintshela kumbono "Konke". Ukuba uvale iZiko leSaziso kwithebhu ethile, le iya kuba yiyo eya kuvela xa uyivula kwakhona.
Umbono "Namhlanje" lolona longezelelweyo lubalulekileyo kwiZiko leSaziso kwi-iOS 7. Ngaphezulu kwale thebhu ungabona umhla kunye nomhla okhoyo ngoku kulandelwa lolunye ulwazi olunjengekhalenda, imarike yemasheya okanye uluhlu lwezinto imiselwe ingomso, ukuba ikho.
Ungakutshintsha okubonakalayo kolu luhlu kuseto. Emva kwexesha siza kuthetha ngezinketho zeZiko leSaziso, kodwa ukuba unomdla ungaya kuseto> IZiko leSaziso ukwenza ngokwezifiso i "Tab" yanamhlanje ngendlela othanda ngayo.
Olu luvo lunokuqulatha naliphi na kula macandelo alandelayo:
Isishwankathelo sanamhlanje: Isishwankathelo seziganeko ezicwangciselwe usuku. Inokuqulatha ulwazi lwemozulu.
Ikhalenda: Iziganeko ezicwangciswe kwikhalenda yosuku.
Izikhumbuzo: Izikhumbuzo zomhla.
Ingxowa: Ulwazi ngengxowa.
Isishwankathelo sangomso: Isishwankathelo seziganeko ezicwangciselwe usuku olulandelayo.
Icandelo ngalinye "Namhlanje" linxibelelene neeapps zazo. Umzekelo, ukucofa kwicandelo lekhalenda kuya kuvula usetyenziso lweKhalenda kwaye ucofe isikhumbuzi uyakuyivula kwiZikhumbuzi. Kukwanjalo nakwisitokhwe kunye nolwazi lwemozulu.
"Zonke" kunye "Akubonwa" imibono
Umbono "Yonke into" ngokuyintloko yayiyiliphi iZiko leSaziso ngaphambi kokufika kwe-iOS 7; uluhlu olulula lwezaziso eziqokelelwe sisicelo.
Isicelo ngasinye simelwe yintloko elula enesithonjana esincinci kwicala lasekhohlo lentloko. Kwicala elichaseneyo leqhosha kukho iqhosha elino "X" embindini. Xa uchukumisa u "X", iqhosha liza kubonisa igama elithi "Cima" kwaye ukuba siyabamba "Cima" zonke izaziso ezisuka kwi-app ekuthethwa ngayo ziya kucinywa.
Umbono "Ongabonwayo", njengombono "Konke", uqulethe uluhlu olulula lwezaziso ezinokucoca usebenzisa iqhosha "X". Ngokungafaniyo nembono "Zonke", umbono "ongabonwayo" ubonisa kuphela izaziso ezingakhange ziboniswe kwiscreen njengebhanile. Izaziso kule thebhu ziboniswa ngokulandelelana ngokulandelelana kwexesha.
Useto lweZiko leSaziso linenani elikhulu lezinto onokukhetha kuzo kungekuphela zokwenza iZiko kodwa nokwenza izilungiso kwiibhena, izandi, kunye nezilumkiso. Koluqwalaselo kukho okungaphezulu kunoko kuhlangana neliso, ke siza kuchaza inkalo nganye kunye necandelo lalo.
Ukutshixa ukufikelela kwescreen
Ukusuka kwi-iOS 7 sinokufikelela kwiZiko leSaziso kunye nescreen esivaliweyo. Ungafikelela ngokupheleleyo kwiziko, uthintele ukufikelela kulo ukuze kuboniswe kuphela "Konke" kunye "Akubonwa", okanye ukhubaze ngokupheleleyo. Ukuyekisa ukusebenza ngokupheleleyo ngescreen esivaliweyo, kufuneka usebenze iindlela ezimbini ezikhoyo eziphantsi kwecandelo «Ukufikelela ngescreen. itshixiwe »kuseto> Iziko lezaziso.
Unokuzikhubaza ezi zinto zilandelayo kolu luvo:
Izaziso kumbono "Zonke" kwiziko leZaziso zinokucwangciswa ngesandla okanye ngokokuqala ukuza, indawo yokuqala enikezelwa kuqala. Uhlobo lweChronologically ukhetho lubonisa izaziso ezivela kwiinkqubo ezithile ezisekwe kwixesha. Umzekelo, ukuba olu khetho lwenziwe kwaye umyalezo obhaliweyo ufikile, umyalezo kunye nezinye izaziso ezivela kwiMiyalezo ziya kuboniswa kuqala.
Unokuhlela uluhlu lwezaziso ngesandla. Ukukhetha ukuHlulela ngokwakho kuya kubonakala kwi-odolo ethile oyilungiselele kwicandelo lokubandakanya, phantsi kweZaziso zokujonga. Icandelo lokubandakanya, esiza kuchaza kamva, luluhlu lwazo zonke izicelo ezinakho ukuthumela izaziso.
Yilapho uza kubona uluhlu lwazo zonke izicelo ezifakwe kwisixhobo ezikwazi ukuthumela uhlobo oluthile lwesaziso. Izaziso zinokuba nezilumkiso, iibhena okanye izandi.
Ukuba ucofe iqhosha u "Hlela" kwikona ephezulu ngasekunene kwezicwangciso zeZaziso, ungasebenzisa ulawulo lokutsala oluvela kwicala lasekunene leapps (ewe, loo migca mithathu ingwevu ngasekunene) ukuyilungisa ngesandla. Olu hlobo lwenziwa lwasebenza xa sikhetha ukuHlulela ngokwakho kwiCandelo loBoniso lweZaziso elikhankanywe ngasentla.
Ngokubeka iapp kwicandelo lokubandakanya, uvumela izaziso ezivela kule app ukuba zivele kwiZiko leSaziso. Isicelo ngasinye esivela phantsi kokubandakanya okanye ungafaki ngaphakathi sinokuqwalaselwa ukuba sisebenzise iibhanile, izilumkiso ezivakalayo, njl.
Iiapps ezingezantsi azibandakanyi azizokwazi ukubonisa izaziso zabo kwiZiko leSaziso. Usenako ukufumana izilumkiso kunye neebhena ezivela kubo kodwa azizukuvela kweli Ziko.
Ungasebenzisa iqhosha elithi "Hlela" kwikona ephezulu ngasekunene kwezicwangciso zeZiko ukuhambisa iiapps ukusuka ku- Ungabandakanyi ukubandakanya kwaye ngokuchaseneyo.
Inkqubo nganye ebekwe phantsi kokuBandakanya okanye ukungafaki inokwenziwa ngokwezifiso nganye. Unokukhetha phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zezilumkiso kwaye uqwalasele ukubonakala kwazo kokubini kwiZiko leSaziso nakwisikrini sokutshixa.
Izitshisi kukugubungela nje okulula okuvela okomzuzwana kwibar yomgangatho xa kufunyenwe isaziso, azibonakali kwaye ziyanyamalala emva kwemizuzwana embalwa.
Izilumkiso, kwelinye icala, ziyacaphukisa ngakumbi kuba zihlala kwiscreen kwaye zifuna unxibelelwano lomsebenzisi lunyamalale.
Unenketho yokwenza kungasetyenziswanga zonke iintlobo zezilumkiso ngokuchukumisa usetyenziso esifuna ukubenza bangalusebenzisi (kuseto lweZiko leZaziso, kwiBandakanya kwaye ungafaki amacandelo) kwaye ukhethe u "Akukho nto" kwicandelo leZilumkiso.
Iibhaluni zesicelo ziimpawu ezincinci ezibomvu ezivela kwikona ephezulu ngasekunene kwezicelo ezikwiskrini sasekhaya. Ezi bhaluni zihlala zikhatshwa linani elimele inani lezilumkiso zesicelo esithile ngexesha elinikiweyo.
Icandelo lezilumkiso kwizicelo ezithile alifuneki njengoko linokukhetha "ukujonga kwiziko lezaziso". Olu khetho lwenza okufanayo nokuhambisa usetyenziso ukusuka ku "Sukubandakanya" ukuya ku "Quka", esele sichazile ngaphambili. Kodwa kukho enye into eyongezelelweyo; kwicandelo "Bandakanya" (kuseto lomntu ngamnye) onokukhetha Izinto ezi-1, ezi-5, ezili-10 okanye ezingama-20 zamva nje ze-app ekuthethwa ngayo zibonisiwe kwiZiko leSaziso.
Ukhetho "lokujonga kwiscreen esivaliweyo", nolukhetho lokugqibela kuninzi lwezicelo, ekuvumela ukuba ubonise okanye ufihle izilumkiso ngescreen esivaliweyo kunye nezaziso kwiZiko leSaziso.
Ezinye izicelo, ezinje ngeMiyalezo okanye usetyenziso lweMeyile, zinokhetho olongezelelekileyo. Umzekelo, ngeMiyalezo, unokhetho lokubonisa imbonakalo yomyalezo kwizilumkiso, kwiibhena, nakwiziko leSaziso.
Okokugqibela, uya kufumana ukhetho oluluncedo lokukhetha ukuba ufuna ukubonisa izaziso ezivela kuwo wonke umntu okanye kuphela kubantu onabo kuQhakamshelwano. Olu khetho luluncedo ngakumbi ukuba ufuna ukunciphisa izaziso kwimithombo engabalulekanga.
Yilapho esi sikhokelo seZiko leSaziso liphela khona. Ukuba unemibuzo, phawula kwaye siya kukuyicombulula ngovuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Isikhokelo esichazayo kwiziko lezaziso
Enkosi kakhulu kwisifundo esindincedileyo ukunceda umthengi.
Molo, xa uhlaziya kwi-ios 7.1 usetyenziso lwemeyile luye lwanyamalala kukhetho lokubandakanya okanye ukungafaki kwiziko lezaziso, ngaphambi kokuhlaziya ukuba ibinayo kwaye ndingayibeka ukubandakanya okanye ukungayibandakanyi, kodwa ngoku ayibonakali, Zonke iiapps ezazikho ngaphambili zivela, ezinje ngemiyalezo, i-twitter, iminxeba, njl., Kodwa i-imeyile yemveli inyamalale kukhetho ukubona izaziso kwiziko lezaziso, ndingenza ntoni ???
Molo, ndinengxaki nge-iPhone 6, kwaye ayisebenzi ngokuchanekileyo kwaye iApple SAT indixelele ukuba yonke into ichanekile. Ndifuna ukuyicwangcisa ukuze izaziso zivele kwiziko lezaziso, kodwa azibonwa kwiscreen esivaliweyo. kwaye eyona ngxaki inkulu kukuba xa ucima ifowuni uyilayite, akusekho nto isebenza, ngokungathi yonke into ayilungiswanga kakuhle ... NGABA UMNTU ANGANDINCEDA UNCEDE?
Omnye umbuzo, ukuba ndenze ukuba isebenze ukhetho "BUKA KWISikrini ESIVALIweyo" kwiscreen esikhiweyo nakwiziko lezaziso? Yintoni ekuya kufuneka ndiyenze ukuze ndibone kuphela kwiziko lezaziso, kodwa isikrini sitshixiwe? eya kuba sisimo esifanelekileyo….
molo, xa ndikhona, zombini kwiscreen sasekhaya okanye kwiscreen sokutshixa naphantsi kweziko lezaziso, indithoba nje kancinci kwaye iphambukele ngasekunene, ayinakubonwa kakuhle, emva koko andinakuyiphakamisa kwaye kufuneka ndicinezele iqhosha lasekhaya lokushiya
Kukhona into engalunganga ngesixhobo sakho. Ndingacebisa ukuba ubuyisele
Enkosi kakhulu Luis, ukubuyiselwa kundincedile
UMargarita de Vasconcellos sitsho
Andikwazi ukufikelela kwiziko lezaziso. Slayida umunwe wakho ezantsi ukusuka kumantla okuphezulu kwesikrini kwaye akukho nto ivelayo.
Phendula uMargarita de Vasconcellos
Iziko lezaziso alibonisi. Utyibilikise umnwe wakhe phantsi kwaye akukho nto iye ezantsi. Kungenzeka ukuba oku kwenzekile ukusukela kuhlaziyo lokugqibela lwesoftware.
I-iPhone 6 inokubandakanya amaqondo obushushu, uxinzelelo kunye nokufuma
Isifundo: Uyisusa njani i-geolocation yeefoto zethu kwi-iPhone